အနောက် တောင်စောင်းအောက် ခရီးပေါက်လာတဲ့ အိမ်လေးများ - Kanbawza Tai News
Home ဆောင်းပါး အနောက် တောင်စောင်းအောက် ခရီးပေါက်လာတဲ့ အိမ်လေးများ
အနောက် တောင်စောင်းအောက် ခရီးပေါက်လာတဲ့ အိမ်လေးများ
September 14, 2019 ဆောင်းပါး,
အေးသာယာမြို့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ အ ကြောင်းရင်း၊ တစ်ပါတီအာဏာရှင်ဟောင်း၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌ၊ မြန်မာ နိုင်ငံကို အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းထဲ အရောက် တွန်းချခဲ့တဲ့ ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကမောတို့ ဌာနေကို တစ်ခါတစ်ခေါက် အရောက်လာ တယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်၊ တောင်ကြီးမြို့ လာတဲ့အချိန် တောင်ကြီးမြို့ အနောက်ဘက် တောင်စောင်းတွေမှာ ကျူးကျူးကျော်ကျော် ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်တွေကို မြင်သွားပါတယ်။ အ ကြောင်းရင်းကို မေးတော့ မြို့တွင်းမှာ အိမ်ပူး အိမ်ညှပ်များလာတဲ့အတွက် အနောက်ဘက် တောင်စောင်းတွေကို ကျွံသွားတာလို့ အဲဒီအ ချိန်က တောင်ကြီးမြို့ခံ ပါတီကောင်စီ လူကြီး တစ်ယောက်က ဖြေပါတယ်။ ဦးနေဝင်းအစပြု တဲ့ မြို့သစ်စီမံကိန်းက ၁၉၈၉၊ မတ်လ ၁ ရက် တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်မှာ အေးသာ ယာဟာ မြို့တစ်ခုအဖြစ် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါ တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ က တောင်ကြီးမြို့ ပေါ် မှာ အိမ်ပူးအိမ်ညှပ်များလို့ အနောက်ဘက် တောင်စောင်း ကျွံသွားတဲ့ အိမ်တွေကြောင့် အေးသာယာဆိုတဲ့ မြို့တစ်ခု မွေးဖွားလာ တယ်။ နှစ် ၃၀ ကြာပြီးတဲ့နောက် တောင် ကြီးမြို့ဟာ ပိုစည်ကားလာတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု များလာတယ်။ မြို့ကွက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့် လာတယ်။ မြို့ပြနေ လူဦးရေ တိုးပွားလာပါ တယ်။ တောင်ကြီးမြို့ အနောက်ဘက်တောင် စောင်းတွေမှာလည်း ဦးနေဝင်း လက်ထက် တုန်းကထက် အရေအတွက် ပိုတဲ့အိမ်တွေ ရှိ လာပါတယ်။ တိုးပွားလာတဲ့ တောင်ကြီးဒေသ ခံ လူဦးရေနဲ့ ဒေသစုံက ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ လာတဲ့ လူတွေကြောင့် တောင်ကြီးမြို့ အ နောက်ဘက် တောင်စောင်းက အိမ်ခြေပေါင်း မြောက်များစွာကို လက်ခံပေးထားရပါတယ်။ သစ်တော်ခြံတွေ ရှိခဲ့တဲ့ နေရာတွေလည်း အ ခုဆို သစ်တော်ပင်ဆိုတာ လက်ညိုးထိုးပြစရာ မရှိတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ စပြောင်းလာတော့ ဒီနေရာ မှာ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မရှိသေးဘူး။ အိမ်ကလည်း စုစုပေါင်းမှ ၇ အိမ်ပဲ ရှိတာ။ ရပ် ကွက်အနောက်ဘက်ခြမ်းဆိုတော့ အဲဒီအချိန် က လာနေတဲ့ သိပ်မရှိဘူး။ လျှပ်စစ်မီးလည်း မရှိဘူး။ ရေကလည်း ရေထွက်ရှိတဲ့ နေရာမှာ သွားခပ်ရတာ။ ရှိတဲ့လမ်းကလည်း မိုးရွာရင် ဗွက်ပေါက်။ နွေဆိုရင် ဖုန်တထောင်းထောင်း နဲ့။ အနောက်ဘက် ချောက်ထဲဆိုတော့ ရပ် ကွက်နဲ့လည်း အဆက်ပြတ်တယ်လို့ ပြောလို့ရ တယ်။ ရွာတစ်ခု မြို့တစ်ခု ထောင်ရင်စုန်း ၇ အိမ် ပါတယ်လို့ ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲ ဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ၇ အိမ်ကို စုန်း ၇ အိမ် လို့တောင် စနောက်ပြီး ခေါ်ကြသေးတယ်။ အ ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ခြေတွေ များလာတာ မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲလို့ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်အနောက် ဘက်ခြမ်း တောင်စောင်းမှာနေထိုင်သူ တစ်ဦး ကပြောပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်း နေရာ အတော်များများ တောင်စောင်းတွေမှာကျောင်း ကြီးစုရပ်ကွက်နည်းတူ အိမ်ခြေတွေ များပြား လာတာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ လက်ရှိနေထိုင် သူတွေဟာ အိမ်ခြံမြေ ပွဲစားလုပ်သူတွေကတစ် ဆင့် ဝယ်ယူနေထိုင်ကြတယ်လို့ ပြောကြပါ တယ်။ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုတဲ့နေ ရာမှာလည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ် မှူးတွေနဲ့ အရပ်စာချုပ် သဘောမျိုး ချုပ်ဆိုကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ မြေကွက် ဟာ အစိုးရပိုင် မြေထဲပါလား။ ကျူးကျော်ဖြစ် နေလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြော နိုင်ကြပါဘူး။ ပွဲစားတွေ လက်ညိုးထိုးတဲ့နေရာ ခြံစည်းရိုး အုတ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ရင် နောက်ကြောင်းပြန်မကြည့်ဘဲ အရောင်းအ ဝယ် ပြုလုပ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်တစ် ချိန် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဆိုးအကောင်း အကျိုး ဆက်တွေလည်း တွေးတောနေကြခြင်း မရှိပါ ဘူး။
ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက် အနောက်ဘက် ခြမ်းက တောင်စောင်းမှာ မြေကွက်ရိုက်ပြီး အိမ် ဆောက်တယ်။ ဝယ်တာကတော့ အဲဒီရပ် ကွက်က အိမ်ခြံမြေ ပွဲစားလုပ်တဲ့ လူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဝယ်ဖြစ်တာပါ။ နေလာတာ ၅ နှစ်လောက် ရှိပြီ ဘာပြဿနာမှ ကြီးကြီးမား မား မရှိပါဘူး။ တောင်အောက်နား နည်းနည်း ရောက်တော့ လမ်းအတက်အဆင်း ခက်ခဲတာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကားအဝင်အထွက် လုပ် လို့ မရဘူး။ ဆိုင်ကယ်တောင် မနည်းထိန်းပြီး မောင်းရတာ။ မိုးရွာထားတဲ့ အချိန်ဆို အဆင်း အတက်လုပ်ဖို့ အန္တရာယ်များတာနဲ့ ဆိုင်ကယ် တွေကို အပေါ်မှာ ထားခဲဲ့ရတယ်။ လမ်းကကွန် ကရစ်လမ်းဆိုတော့ ရေညှိတွေ တက်ပြီးတချို့ နေရာမှာ ချော်တတ်တော့ တော်ရုံလူ၊ ဆိုင် ကယ်နဲ့ အတက်အဆင်း မလုပ်ရဲဘူး။ ကျန်တာ တော့ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်အတွင်း ပြောင်း ရွှေ့လာသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အခု အိမ်ဆောက်ထားတဲ့နေရာတွေ အ ရင်တုန်းက သစ်တော်ခြံတွေ၊ တောင်ယာစိုက် ခင်းနေရာတွေပေါ့။ ပိုင်ရှင်တွေ ရှိတယ်။ ဘိုး ဘွားပိုင်မြေလို့ ပြောကြတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုး ရလက်ထက်မှာ မြေအရောင်းအဝယ် တော် တော်လေး ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပိုင်ရှင်တွေက သူတို့ပိုင်တဲ့ မြေတွေကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပြီး အကွက်ရိုက် ရောင်းကြတာ။ စျေး နှုန်းကလည်းသင့်တော့ ငွေနည်းနည်းတတ်နိုင် တဲ့လူတွေ၊ အမှန်တကယ်နေဖို့ အိမ်လိုတဲ့ လူ တွေအတွက် အဲဒီအကွက်တွေက နေလို့ အ ဆင်ပြေတာပေါ့။ အခုဆိုရင် တချို့လမ်းတွေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကတ္တရာခင်းကြတယ်။ ကျန် တဲ့လမ်းတော်တော်များများက ကွန်ကရစ်ခင်း ထားကြတယ်။ လူနေအိမ်ခြေ များလာသလို စျေးနှုန်းလည်း သင့်တဲ့အတွက် အရောင်းအ ဝယ် ထိုက်သင့်သလောက် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝါ ရင့်အိမ်ခြံမြေ ပွဲစားတစ်ယောက် ပြောပါတယ်။
လူသားမှန်သမျှ အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ လိုအပ်ကြပါတယ်။ ကြီးချင်ကြီးမယ်။ သေးချင် လည်း သေးလိမ့်မယ်။ ခမ်းနားခြင်း ပြည့်စုံခြင်း ပါတဲ့ အိမ် ဖြစ်နိုင်သလို လူသားတစ်ယောက် နေလို့ရတဲ့ အိမ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အဓိကက တော့ မိသားစုနေထိုင် နားခိုလို့ရမယ့် အိမ်။ ခု တလောမှာ ငါမက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ အရမ်း ထူးဆန်းတယ်။ မြက်ခင်းနဲ့ ခြံဝင်းနဲ့ အိမ်လေး ကို တို့နှစ်ယောက်ပိုင်သတဲ့။ မောင်မောင်ဇော် လတ် ရေးပြီး တောင်ကြီးသား အဆိုတော် အ ငဲဆိုထားတဲ့ အိမ်သီချင်းထဲက စာသားတချို့။ မိသားစုတိုင်း အကောင်းဆုံး နားခိုဖို့ အိမ်လေး တစ်လုံး လိုချင်ကြတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ် မယ့် အိမ်လေးကလည်း အန္တရာယ်ကင်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ အနောက်ဘက် တောင်စောင်းအောက်က အိမ်လေးတွေ အ ကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းမလားဆို တာတော့ တာဝန်ရှိသူများ အသိဆုံးဖြစ်လိမ့် မယ် ထင်မြင်မိကြောင်းပါ။
အောင်ပန်းတွင် ငွေကျပ် ၃၈ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ ICE များ ဖမ်းဆီးရမိ
မင်း​ဇော်မင်း . ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အောင်ပန်းမြို့တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖ...
တောင်ကြီးတွင် Quarantine ဝင်နေသူ တစ်ဦး ဖျား​နေသဖြင့် စဝ်စံထွန်း​ဆေးရုံ၌ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထား
စုလှိုင် . တောင်ကြီးမြို့ရှိ မိုးကုတ်ရိပ်သာ၌ Quarantine ဝင်နေသော အမျိုးသား တစ်ဦးမှာ ဖျား​နေသဖြင့် ယနေ့ (မေလ ၃၁ ရက်) တွင် စဝ်စံထွန်း ဆေးရု...
နမ့်စန်တွင် ရလခ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်မည့် မြေနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်မှုများ ရှိနေ
စုလှိုင် . ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်အတွင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ စစ်မှုထမ်း ဟောင်းအိမ...
တောင်ကြီးအပါအဝင် မြို့နယ် ၈ ခုတွင် ဝက်နှင့် ဝက်ထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့ရောင်းချမှုအား ယာယီပိတ်ပင်
မင်းဇော်မင်း . ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အင်းလေးကန်ဒေသ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်တွင် ဝက်အားနည်းရောဂါ (PorcineCircovirus Type-2) ဖြစ်ပွား...
အင်းလေးဒေသတွင် အိမ်မွေးဝက်များ ကောင်ရေ ရာနှင့်ချီ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
မင်းဇော်မင်း . ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အင်းလေးကန်ဒေသ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အိမ်မွေးဝက်များ ရာနှင့်ချီ သေဆုံ...
Archive Jun 05 (15) Jun 04 (10) Jun 03 (9) Jun 02 (10) Jun 01 (8) May 31 (11) May 30 (11) May 29 (12) May 28 (10) May 27 (15) May 26 (10) May 25 (16) May 24 (7) May 23 (17) May 22 (6) May 21 (8) May 20 (4) May 19 (13) May 18 (13) May 17 (15) May 16 (16) May 15 (12) May 14 (9) May 13 (9) May 12 (12) May 11 (12) May 10 (9) May 09 (12) May 08 (12) May 07 (16) May 06 (11) May 05 (11) May 04 (8) May 03 (14) May 02 (12) May 01 (13) Apr 30 (8) Apr 29 (13) Apr 28 (12) Apr 27 (10) Apr 26 (9) Apr 25 (8) Apr 24 (20) Apr 23 (10) Apr 22 (6) Apr 21 (11) Apr 20 (14) Apr 19 (17) Apr 18 (9) Apr 17 (12) Apr 16 (11) Apr 15 (11) Apr 14 (14) Apr 13 (17) Apr 12 (13) Apr 11 (16) Apr 10 (12) Apr 09 (8) Apr 08 (11) Apr 07 (11) Apr 06 (11) Apr 05 (4) Apr 04 (12) Apr 03 (9) Apr 02 (9) Apr 01 (11) Mar 31 (16) Mar 30 (15) Mar 29 (14) Mar 28 (15) Mar 27 (18) Mar 26 (17) Mar 25 (12) Mar 24 (13) Mar 23 (10) Mar 22 (8) Mar 21 (10) Mar 20 (13) Mar 19 (13) Mar 18 (9) Mar 17 (13) Mar 16 (9) Mar 15 (9) Mar 14 (7) Mar 13 (11) Mar 12 (14) Mar 11 (5) Mar 10 (8) Mar 09 (9) Mar 08 (7) Mar 07 (7) Mar 06 (15) Mar 05 (10) Mar 04 (6) Mar 03 (5) Mar 02 (8) Mar 01 (8) Feb 29 (5) Feb 28 (9) Feb 27 (10) Feb 26 (7) Feb 25 (9) Feb 24 (10) Feb 23 (4) Feb 22 (8) Feb 21 (9) Feb 20 (10) Feb 19 (9) Feb 18 (8) Feb 17 (7) Feb 16 (7) Feb 15 (11) Feb 14 (8) Feb 13 (15) Feb 12 (1) Feb 11 (7) Feb 10 (12) Feb 09 (7) Feb 08 (3) Feb 07 (9) Feb 06 (9) Feb 05 (13) Feb 04 (4) Feb 03 (7) Feb 02 (12) Feb 01 (9) Jan 31 (10) Jan 30 (9) Jan 29 (11) Jan 28 (9) Jan 27 (8) Jan 26 (8) Jan 25 (5) Jan 24 (10) Jan 23 (11) Jan 22 (11) Jan 21 (11) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (4) Jan 17 (5) Jan 16 (16) Jan 15 (11) Jan 14 (10) Jan 13 (10) Jan 12 (6) Jan 11 (8) Jan 10 (3) Jan 09 (6) Jan 08 (11) Jan 07 (2) Jan 06 (7) Jan 05 (8) Jan 04 (10) Jan 03 (10) Jan 02 (12) Jan 01 (11) Dec 31 (4) Dec 30 (8) Dec 29 (6) Dec 28 (10) Dec 27 (6) Dec 26 (11) Dec 25 (9) Dec 24 (7) Dec 23 (5) Dec 22 (4) Dec 21 (7) Dec 20 (10) Dec 19 (12) Dec 18 (6) Dec 17 (3) Dec 16 (11) Dec 15 (11) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (1) Dec 11 (8) Dec 10 (6) Dec 09 (4) Dec 08 (6) Dec 07 (7) Dec 06 (11) Dec 05 (11) Dec 04 (9) Dec 03 (7) Dec 02 (5) Dec 01 (4) Nov 30 (7) Nov 29 (10) Nov 28 (9) Nov 27 (7) Nov 26 (6) Nov 25 (5) Nov 24 (7) Nov 23 (6) Nov 22 (8) Nov 21 (8) Nov 20 (7) Nov 19 (3) Nov 18 (5) Nov 17 (7) Nov 16 (6) Nov 15 (5) Nov 14 (6) Nov 13 (6) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (6) Nov 08 (8) Nov 07 (4) Nov 06 (4) Nov 05 (3) Nov 04 (4) Nov 03 (5) Nov 02 (2) Nov 01 (5) Oct 31 (7) Oct 30 (6) Oct 29 (4) Oct 28 (3) Oct 27 (8) Oct 26 (4) Oct 25 (5) Oct 24 (13) Oct 23 (6) Oct 22 (7) Oct 21 (1) Oct 20 (7) Oct 19 (6) Oct 18 (9) Oct 17 (5) Oct 16 (5) Oct 15 (2) Oct 14 (6) Oct 13 (9) Oct 12 (3) Oct 11 (7) Oct 10 (7) Oct 09 (11) Oct 08 (7) Oct 07 (6) Oct 06 (2) Oct 05 (9) Oct 04 (5) Oct 03 (14) Oct 02 (8) Oct 01 (9) Sep 30 (4) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 25 (15) Sep 24 (9) Sep 23 (3) Sep 22 (6) Sep 21 (10) Sep 20 (10) Sep 19 (9) Sep 18 (10) Sep 17 (7) Sep 16 (5) Sep 15 (7) Sep 14 (10) Sep 13 (8) Sep 12 (10) Sep 11 (10) Sep 10 (9) Sep 09 (5) Sep 08 (9) Sep 07 (7) Sep 06 (8) Sep 05 (12) Sep 04 (11) Sep 03 (8) Sep 02 (4) Sep 01 (4) Aug 31 (8) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 28 (11) Aug 27 (8) Aug 26 (9) Aug 25 (8) Aug 24 (9) Aug 23 (9) Aug 22 (15) Aug 21 (7) Aug 20 (6) Aug 19 (6) Aug 18 (13) Aug 17 (8) Aug 16 (11) Aug 15 (2) Aug 14 (7) Aug 13 (4) Aug 12 (8) Aug 11 (7) Aug 10 (9) Aug 09 (7) Aug 08 (10) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (8) Aug 04 (8) Aug 03 (7) Aug 02 (12) Aug 01 (15) Jul 31 (6) Jul 30 (12) Jul 29 (6) Jul 28 (11) Jul 27 (10) Jul 26 (13) Jul 25 (13) Jul 24 (11) Jul 23 (9) Jul 22 (5) Jul 21 (14) Jul 20 (15) Jul 19 (11) Jul 18 (8) Jul 17 (9) Jul 16 (9) Jul 15 (10) Jul 14 (12) Jul 13 (11) Jul 12 (13) Jul 11 (13) Jul 10 (6) Jul 09 (3) Jul 08 (4) Jul 07 (6) Jul 06 (8) Jul 05 (7) Jul 04 (4) Jul 03 (5) Jul 02 (3) Jul 01 (2) Jun 28 (3) Jun 27 (8) Jun 26 (5) Jun 25 (6) Jun 24 (4) Jun 23 (5) Jun 22 (2) Jun 21 (6) Jun 20 (10) Jun 19 (8) Jun 18 (10) Jun 17 (2) Jun 15 (6) Jun 14 (2) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (3) Jun 10 (4) Jun 08 (5) Jun 07 (7) Jun 06 (5) Jun 05 (3) Jun 04 (3) Jun 03 (5) Jun 02 (3) May 31 (4) May 30 (10) May 29 (8) May 28 (7) May 27 (2) May 26 (1) May 25 (5) May 24 (5) May 23 (7) May 22 (6) May 21 (5) May 19 (4) May 18 (13) May 17 (3) May 16 (9) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (6) May 12 (5) May 11 (7) May 10 (1) May 09 (5) May 08 (3) May 07 (5) May 06 (5) May 05 (6) May 04 (4) May 03 (3) May 02 (9) May 01 (9) Apr 30 (7) Apr 29 (7) Apr 28 (3) Apr 27 (7) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 24 (7) Apr 23 (1) Apr 22 (8) Apr 21 (4) Apr 20 (3) Apr 19 (4) Apr 18 (7) Apr 17 (7) Apr 15 (6) Apr 14 (2) Apr 13 (5) Apr 12 (5) Apr 11 (8) Apr 10 (7) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (1) Apr 06 (7) Apr 05 (6) Apr 04 (9) Apr 03 (6) Apr 02 (8) Mar 31 (6) Mar 30 (5) Mar 29 (7) Mar 28 (8) Mar 27 (7) Mar 26 (11) Mar 25 (6) Mar 24 (4) Mar 23 (9) Mar 22 (4) Mar 21 (4) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (6) Mar 17 (4) Mar 16 (5) Mar 15 (12) Mar 14 (11) Mar 13 (8) Mar 12 (5) Mar 11 (10) Mar 10 (4) Mar 09 (11) Mar 08 (8) Mar 07 (13) Mar 06 (3) Mar 05 (4) Mar 04 (6) Mar 03 (1) Mar 02 (2) Mar 01 (10) Feb 28 (11) Feb 26 (5) Feb 25 (5) Feb 24 (11) Feb 23 (2) Feb 22 (9) Feb 21 (4) Feb 20 (4) Feb 19 (4) Feb 18 (3) Feb 17 (7) Feb 16 (11) Feb 15 (5) Feb 14 (8) Feb 13 (12) Feb 12 (8) Feb 11 (8) Feb 10 (1) Feb 09 (8) Feb 08 (9) Feb 07 (10) Feb 06 (11) Feb 05 (7) Feb 04 (8) Feb 03 (4) Feb 02 (9) Feb 01 (6) Jan 31 (8) Jan 30 (6) Jan 29 (4) Jan 28 (6) Jan 27 (5) Jan 26 (6) Jan 25 (6) Jan 24 (14) Jan 23 (9) Jan 22 (7) Jan 21 (5) Jan 20 (6) Jan 19 (12) Jan 18 (9) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (5) Jan 14 (6) Jan 13 (4) Jan 12 (5) Jan 11 (9) Jan 10 (10) Jan 09 (6) Jan 08 (6) Jan 07 (7) Jan 06 (6) Jan 05 (7) Jan 04 (8) Jan 03 (12) Jan 02 (11) Dec 31 (13) Dec 30 (8) Dec 29 (10) Dec 28 (7) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (10) Dec 24 (14) Dec 23 (5) Dec 22 (7) Dec 21 (7) Dec 20 (9) Dec 19 (7) Dec 18 (5) Dec 17 (7) Dec 16 (3) Dec 15 (6) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (7) Dec 11 (17) Dec 10 (12) Dec 09 (5) Dec 08 (6) Dec 07 (10) Dec 06 (14) Dec 05 (8) Dec 04 (5) Dec 03 (10) Dec 02 (6) Dec 01 (11) Nov 30 (10) Nov 29 (8) Nov 28 (12) Nov 27 (2) Nov 26 (8) Nov 25 (5) Nov 24 (5) Nov 23 (4) Nov 22 (1) Nov 21 (18) Nov 20 (10) Nov 19 (8) Nov 18 (2) Nov 17 (8) Nov 16 (17) Nov 15 (11) Nov 14 (5) Nov 13 (2) Nov 12 (3) Nov 11 (9) Nov 10 (15) Nov 09 (12) Nov 08 (5) Nov 07 (3) Nov 06 (5) Nov 05 (6) Nov 04 (2) Nov 03 (8) Nov 02 (7) Nov 01 (8) Oct 30 (9) Oct 29 (10) Oct 28 (7) Oct 27 (8) Oct 26 (10) Oct 25 (3) Oct 24 (5) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (3) Oct 20 (5) Oct 19 (4) Oct 18 (12) Oct 17 (5) Oct 16 (11) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (10) Oct 12 (12) Oct 11 (13) Oct 10 (3) Oct 09 (7) Oct 08 (5) Oct 07 (4) Oct 06 (3) Oct 05 (6) Oct 04 (16) Oct 03 (4) Oct 02 (6) Oct 01 (6) Sep 30 (2) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (9) Sep 25 (9) Sep 24 (6) Sep 23 (4) Sep 22 (10) Sep 21 (4) Sep 20 (5) Sep 19 (14) Sep 18 (13) Sep 17 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (9) Sep 13 (1) Sep 12 (9) Sep 11 (5) Sep 10 (6) Sep 09 (5) Sep 08 (6) Sep 07 (8) Sep 06 (8) Sep 05 (6) Sep 04 (8) Sep 03 (10) Sep 02 (4) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (9) Aug 29 (11) Aug 28 (4) Aug 27 (7) Aug 26 (4) Aug 25 (6) Aug 24 (7) Aug 23 (10) Aug 22 (10) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (8) Aug 18 (9) Aug 17 (16) Aug 16 (10) Aug 15 (1) Aug 14 (9) Aug 13 (6) Aug 12 (5) Aug 11 (12) Aug 10 (13) Aug 09 (16) Aug 08 (6) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (9) Aug 04 (13) Aug 03 (11) Aug 02 (15) Aug 01 (8) Jul 31 (7) Jul 30 (3) Jul 29 (8) Jul 28 (12) Jul 27 (10) Jul 26 (14) Jul 25 (7) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 22 (5) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (5) Jul 18 (6) Jul 17 (4) Jul 16 (9) Jul 15 (1) Jul 14 (3) Jul 13 (5) Jul 12 (13) Jul 11 (6) Jul 10 (5) Jul 09 (10) Jul 08 (3) Jul 07 (13) Jul 06 (12) Jul 05 (13) Jul 03 (12) Jul 02 (5) Jun 30 (11) Jun 29 (9) Jun 28 (13) Jun 27 (2) Jun 26 (1) Jun 25 (7) Jun 24 (6) Jun 23 (12) Jun 22 (12) Jun 21 (15) Jun 20 (6) Jun 19 (3) Jun 18 (10) Jun 17 (4) Jun 16 (5) Jun 15 (8) Jun 14 (12) Jun 13 (9) Jun 12 (4) Jun 11 (8) Jun 10 (4) Jun 09 (7) Jun 08 (17) Jun 07 (13) Jun 06 (9) Jun 05 (8) Jun 04 (5) Jun 03 (5) Jun 02 (6) Jun 01 (10) May 31 (6) May 30 (4) May 28 (13) May 26 (7) May 25 (3) May 24 (8) May 23 (8) May 22 (10) May 21 (6) May 20 (6) May 19 (6) May 18 (7) May 17 (16) May 16 (8) May 15 (10) May 14 (10) May 13 (7) May 12 (7) May 11 (6) May 10 (15) May 09 (7) May 08 (11) May 07 (4) May 06 (5) May 05 (4) May 04 (6) May 03 (13) May 02 (5) May 01 (5) Apr 30 (19) Apr 29 (4) Apr 28 (8) Apr 27 (8) Apr 26 (14) Apr 25 (6) Apr 24 (11) Apr 23 (9) Apr 22 (3) Apr 21 (4) Apr 20 (7) Apr 19 (9) Apr 17 (5) Apr 16 (1) Apr 14 (3) Apr 13 (7) Apr 12 (11) Apr 11 (6) Apr 10 (10) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (7) Apr 06 (8) Apr 05 (11) Apr 04 (11) Apr 03 (9) Apr 02 (7) Apr 01 (6) Mar 31 (8) Mar 30 (11) Mar 29 (8) Mar 28 (11) Mar 27 (9) Mar 26 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (8) Mar 23 (15) Mar 22 (8) Mar 21 (7) Mar 20 (11) Mar 19 (11) Mar 18 (5) Mar 17 (9) Mar 16 (15) Mar 15 (12) Mar 14 (10) Mar 13 (15) Mar 12 (8) Mar 11 (5) Mar 10 (13) Mar 09 (6) Mar 08 (13) Mar 07 (10) Mar 06 (11) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (9) Mar 01 (6) Feb 28 (11) Feb 27 (15) Feb 26 (14) Feb 25 (4) Feb 24 (10) Feb 23 (9) Feb 22 (14) Feb 21 (11) Feb 20 (16) Feb 19 (11) Feb 18 (6) Feb 17 (10) Feb 16 (13) Feb 15 (14) Feb 14 (9) Feb 13 (12) Feb 12 (11) Feb 11 (7) Feb 10 (8) Feb 09 (10) Feb 08 (15) Feb 07 (11) Feb 06 (6) Feb 05 (5) Feb 04 (6) Feb 03 (4) Feb 02 (7) Feb 01 (10) Jan 31 (9) Jan 30 (4) Jan 29 (8) Jan 27 (10) Jan 26 (11) Jan 25 (9) Jan 24 (7) Jan 23 (9) Jan 22 (8) Jan 21 (5) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (10) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (15) Jan 14 (8) Jan 13 (6) Jan 12 (10) Jan 11 (11) Jan 10 (13) Jan 09 (9) Jan 08 (1) Jan 07 (5) Jan 06 (8) Jan 05 (9) Jan 04 (8) Jan 03 (8) Jan 02 (5) Jan 01 (8) Dec 31 (3) Dec 30 (4) Dec 29 (5) Dec 28 (4) Dec 27 (4) Dec 26 (6) Dec 25 (7) Dec 24 (4) Dec 23 (5) Dec 22 (10) Dec 21 (10) Dec 20 (6) Dec 19 (7) Dec 18 (8) Dec 17 (3) Dec 16 (9) Dec 15 (8) Dec 14 (10) Dec 13 (6) Dec 12 (10) Dec 11 (6) Dec 10 (7) Dec 09 (3) Dec 08 (5) Dec 07 (12) Dec 06 (10) Dec 05 (11) Dec 04 (6) Dec 03 (4) Dec 02 (9) Dec 01 (7) Nov 30 (9) Nov 29 (6) Nov 28 (5) Nov 27 (8) Nov 26 (6) Nov 25 (6) Nov 24 (10) Nov 23 (8) Nov 22 (10) Nov 21 (10) Nov 20 (7) Nov 19 (5) Nov 18 (7) Nov 17 (8) Nov 16 (14) Nov 15 (8) Nov 14 (9) Nov 13 (10) Nov 12 (7) Nov 11 (7) Nov 10 (10) Nov 09 (9) Nov 08 (7) Nov 07 (7) Nov 06 (6) Nov 05 (4) Nov 04 (6) Nov 03 (8) Nov 02 (8) Nov 01 (8) Oct 31 (7) Oct 30 (5) Oct 29 (6) Oct 28 (6) Oct 27 (8) Oct 26 (11) Oct 25 (7) Oct 24 (4) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (8) Oct 20 (8) Oct 19 (5) Oct 18 (5) Oct 17 (4) Oct 16 (7) Oct 15 (5) Oct 14 (4) Oct 13 (5) Oct 12 (10) Oct 11 (9) Oct 10 (5) Oct 09 (1) Oct 08 (5) Oct 07 (7) Oct 06 (6) Oct 05 (7) Oct 04 (5) Oct 03 (6) Oct 02 (5) Oct 01 (6) Sep 30 (4) Sep 29 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (5) Sep 26 (11) Sep 25 (6) Sep 24 (4) Sep 23 (8) Sep 22 (6) Sep 21 (5) Sep 20 (6) Sep 19 (5) Sep 18 (9) Sep 17 (8) Sep 16 (6) Sep 15 (7) Sep 14 (9) Sep 13 (9) Sep 12 (10) Sep 11 (9) Sep 10 (5) Sep 09 (8) Sep 08 (10) Sep 07 (8) Sep 06 (10) Sep 05 (4) Sep 04 (10) Sep 03 (7) Sep 02 (7) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (8) Aug 29 (9) Aug 28 (10) Aug 27 (5) Aug 26 (3) Aug 25 (8) Aug 24 (8) Aug 23 (9) Aug 22 (8) Aug 21 (12) Aug 20 (8) Aug 19 (8) Aug 18 (10) Aug 17 (10) Aug 16 (10) Aug 15 (10) Aug 14 (12) Aug 13 (9) Aug 12 (9) Aug 11 (10) Aug 10 (13) Aug 09 (9) Aug 08 (13) Aug 07 (13) Aug 06 (3) Aug 05 (12) Aug 04 (11) Aug 03 (11) Aug 02 (10) Aug 01 (11) Jul 31 (11) Jul 30 (7) Jul 29 (9) Jul 28 (9) Jul 27 (10) Jul 26 (8) Jul 25 (10) Jul 24 (7) Jul 23 (6) Jul 22 (8) Jul 21 (10) Jul 20 (12) Jul 19 (6) Jul 18 (6) Jul 17 (8) Jul 16 (7) Jul 15 (10) Jul 14 (11) Jul 13 (12) Jul 12 (10) Jul 11 (8) Jul 10 (13) Jul 09 (1) Jul 08 (11) Jul 07 (9) Jul 06 (12) Jul 05 (9) Jul 04 (8) Jul 03 (7) Jul 02 (7) Jul 01 (7) Jun 30 (6) Jun 29 (8) Jun 28 (7) Jun 27 (11) Jun 26 (10) Jun 25 (10) Jun 24 (9) Jun 23 (13) Jun 22 (9) Jun 21 (9) Jun 20 (9) Jun 19 (10) Jun 18 (5) Jun 17 (12) Jun 16 (11) Jun 15 (14) Jun 14 (9) Jun 13 (13) Jun 12 (14) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (10) Jun 08 (17) Jun 07 (10) Jun 06 (15) Jun 05 (11) Jun 04 (9) Jun 03 (11) Jun 02 (10) Jun 01 (16) May 31 (14) May 30 (13) May 29 (14) May 28 (9) May 27 (18) May 26 (16) May 25 (24) May 24 (10) May 23 (9) May 22 (16) May 21 (8) May 20 (9) May 19 (9) May 18 (10) May 17 (13) May 16 (12) May 15 (10) May 14 (8) May 13 (5) May 12 (10) May 11 (10) May 10 (14) May 09 (10) May 08 (7) May 07 (12) May 06 (6) May 05 (11) May 04 (14) May 03 (3) May 02 (13) May 01 (16) Apr 30 (7) Apr 29 (11) Apr 28 (10) Apr 27 (8) Apr 26 (11) Apr 25 (9) Apr 24 (7) Apr 23 (5) Apr 22 (8) Apr 21 (7) Apr 20 (10) Apr 19 (11) Apr 18 (9) Apr 17 (3) Apr 16 (5) Apr 15 (6) Apr 14 (7) Apr 13 (6) Apr 12 (12) Apr 11 (12) Apr 10 (11) Apr 09 (12) Apr 08 (11) Apr 07 (14) Apr 06 (12) Apr 05 (12) Apr 04 (13) Apr 03 (13) Apr 02 (8) Apr 01 (4) Mar 31 (8) Mar 30 (9) Mar 29 (12) Mar 28 (14) Mar 27 (20) Mar 26 (7) Mar 25 (14) Mar 24 (13) Mar 23 (15) Mar 22 (18) Mar 21 (12) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (12) Mar 17 (11) Mar 16 (14) Mar 15 (9) Mar 14 (15) Mar 13 (17) Mar 12 (10) Mar 11 (15) Mar 10 (9) Mar 09 (13) Mar 08 (12) Mar 07 (11) Mar 06 (16) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (12) Mar 02 (10) Mar 01 (6) Feb 28 (2) Feb 27 (4) Feb 26 (7) Feb 25 (3) Feb 24 (5)